Jilayaasha Qurxoon - Dharka Ragga ee Qaabka leh | Ragga Stylish
Alicia tomero | | dhaqanka, nololeedka
Haddii aan rabno inaan sharraxno dhabbaha jilaa, waa inaan dhahnaa taas Si aad caan ugu noqotid, xirfaddaadu waa inay noqotaa mid aan cillad lahayn. Jilayaal qurux badan mooyee, iyagu waa xirfadlayaal filim weyn, waa dad karti u leh shaqadooda, hami leh oo doonaya in la hagaajiyo maalin kasta si ka sii badan oo leh dabeecad hal abuur leh
Waxay ka soo dhalaalayaan dhammaan filimadiisa, tan iyo marka laga reebo inay yihiin jilaayaal wanaagsan rafcaankoodu wuxuu ka dhigayaa kuwo aan la dhaafi karin. Inbadan oo kamid ah jilaayaashan quruxda badan elixir ee dhalinyarada weligeed ah ayaa kadhigtay qaar badan oo kamid ah, halka kuwa kale ay sameysay Waqtiga la dhaafaa wuxuu calaamadeeyaa soojiidasho aad uga badan intii ay lahaayeen.
0.1 Jilayaasha Isbaanishka qurxoon
0.2 kaniisadaha maxi
0.3 Ciise Castro
1 Jilayaal aan isbaanish aheyn oo qurux badan
Jilayaasha Isbaanishka qurxoon
Jilaa qurux badan, soo jiidasho leh oo xarrago leh kaasoo bilaabay shaqadiisa isagoo sameeyay taxane dhowr ah oo telefishan Isbaanish ah. Ilaa maantadan la joogo wuxuu durba leeyahay xirfad jiliin dhalaalaysa gadaashiisa waxaana laga arki karaa filimada sida 8 xigashooyin, Xusuus-qorka Carlota o Been iyo dufan.
Jilaagan Cádiz hubi inaad ka tagto wax ka badan hal maskax oo indha indheyntiisa. Ku caan bax filimka Wiilkii halkaasna wuxuu ka bilaabay xirfad aan la joojin karin isaga oo wata taxane caan ah oo Isbaanish ah. Mid kale oo filimadiisa ah ayaa la duubay Jasiiradda ugu yar sannadkanna dhowr shaqo ayuu waddada ku hayaa.
Ka bilow bidix ilaa midig: Maxi Iglesias, Jesús Castro, Miguel Ángel Silvestre iyo Mario Casas.
Dhamaanteen waan ku naqaanaa Miguel Ángel doorkiisa telefishanka Duke-ka taxanaha Naaso la'aana janno ma jirto, xagee caan ku noqday shaqadiisa weyn iyo muuqaalkiisa wanaagsan. Wuxuu qabtay filimo Isbaanish ah sida Aroos saaxiibkay ugu fiican, Ubax jacayl, iyo aflaanta shisheeye ee aagga Mareykanka sida Zhao o BADIYEY.
Wiilkan 34 jirka ah wuxuu qabtay shaqooyin badan oo telefishan oo caan ka dhigay, Waana inuu bilaabay inuu xayeysiis ka sameeyo telefishanka halkaasna uu ka bilaabay barashada jilitaanka. Tan iyo markaas waxay ahayd joogsi la’aan qandaraasyo iyo shaqooyin. Waxaan ku arki karnaa isaga filimada caanka ah sida Geedaha Palm ee Barafka o Saddex mitir oo samada ka sarreeya.
Jilayaal aan isbaanish aheyn oo qurux badan
Isagu waa jilaa Ingiriis ah oo moodeel ah oo caan ku noqday doorkiisa hoggaamineed ee Konton Hadh oo Cawl ah. Wuxuu ku caan baxay caan ahaanshihiisa, muuqaalka muuqaalka iyo xiisaha wiilka tan iyo markii uu na dhex galiyay doorka nin sexy iyo milyaneer. Waxaan ku arki karnaa isaga masraxa asalkiisa nin xiise leh sida filimada Go'doominta Jadotville o Bilowga Dhammaadka.
Jilaagan reer Scotland waa qalbi qumman waana taas iyada oo 50-kiisa sano uu weli kor u qaadayo damaca. Indhihiisa buluuga ah iyo astaamaha muuqaalkiisu waxay isaga siinayaan soo jiidashadaas gaarka ah, marka laga reebo xaqiiqda ah in xirfaddiisa xirfadeed uusan uga tagaynin wax yar oo ammaan ah, tan iyo Isagu waa jilaa buuxa oo filim sameeye ah isla markaana soo saare filim ah. Waxaan ku arki karnaa isaga filimada caanka ah iyo muuqaalka dareenka leh Ilaahyada Masar, Askariga ilaahay y Weerar Aqalka Cad.
Jilaagan reer Mareykan ah wax walba wuu heystaa waana 32 jir jir ahaaneed weyn ay ku keentay inuu ku riyaaqo dhammaan riyadiisii, maxaa yeelay mar hore ayey rumoobeen. Jilaa ahaan waxaa u sii dheer, waa muusikiiste, waayihiisii ​​gaabana wuxuu horey u qabtay mashaariic aan la soo koobi karin shaqeeyey, oo ay ku jiraan taxanaha telefishanka iyo filimada. Waxaan ku arki karnaa filimada jaceylka si aan kor ugu qaadno damaca sida ku jirta Markaan ku helo o Charlie St. Cloud.
Ka bilow bidix ilaa midig: Jamie Dornan, Gerard Butler iyo Zac Efron.
Waxaa loo yaqaan Superman-ka cusub, jilaa weyn oo leh muuqaal jirkiisa laga masixi karo. Indhihiisa buluugga ahi waxay muujinayaan jilicsanaan, waxay ku kala duwan yihiin timahiisa madow waxayna ka dhigayaan nin leh waji soo jiidasho leh oo aan la diidi karin haween badan. Kuwa isaga yaqaanna waxay ku sifeeyaan inuu yahay mudane weyn iyo kaftan british weyn, laakiin intaas maahan intaas, maadaama jirkiisa muruqyada u muuqdo mid bir ka sameysan. Waxaan ku arki karnaa filimada sida Aan dhimaneyn ama Tirinta Monte Cristo.
Jilaagan waa mid waxqabad badan, maadaama uu leeyahay xirfad qurux badan sida jilaa iyo heesaa koox, gitaariste, muusigleyaal iyo heesaha heesta kooxda kale 30 Ilbiriqsi illaa Mars. Da'diisu uma dhigma jidhkiisa, maxaa yeelay isaga oo 48 jir ah ayuu weli ku sii jiraa wejigaas wiil aan waxba galabsan oo qaangaadh ah. Waxaan ku arki karnaa filimada sida Nolosha Macquulka ah ee Mr. Qofna o Codsi Riyadeed
Bidix ilaa midig: Henry Cayill, Jared Leto iyo Kit Harington.
Racfaankeedu waa mid aan la inkiri karin waana jilaaga u kacay sidii xumbo doorkiisa Jon Snow ee taxanaha caanka ah ee Ciyaarta Carshiga. Haddii lagu sifeyn karo ereyo kooban nolosha dhabta ah, asxaabtiisa kama fashilmaan inay u qalmaan sida nin aad iyo aad u qurux badan gudaha iyo dibaddaba, caqli badan oo karti badan. Shaki kama qabin waxaas oo dhan maxaa yeelay waxay ka dhalaalaysaa muuqaalka jilicsanaanta, daacadnimada iyo soojiidashada oo leh wax walba. Marka laga reebo qoritaankiisa qaybtan sharafta leh waxaan ku arki karnaa filimada sida Aqoonsi labalaab ah o Axdiga Dhallinyarada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Jilayaal qurux badan